Ny UNIGLOBE Premium Travel dia manao sonia fiaraha-miasa manokana amin'ny BAC Credomatic VIP Lounge
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny UNIGLOBE Premium Travel dia manao sonia fiaraha-miasa manokana amin'ny BAC Credomatic VIP Lounge
Mpandeha manidina miaraka amin'ny UNIGLOBE Premium Travel any Costa Rica dia mahazo fidirana malalaka amin'ny efitrano malalaky ny seranam-piaramanidina vaovao eto amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Juan Santamaria, fantatra ihany koa amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Jose (SJO).
UNIGLOBE Premium Travel dia nanao sonia fifanarahana exclusivité niaraka tamin'ny BAC Credomatic VIP Lounge, izay nahatonga azy io ho hany orinasa mpitantana ny dia any Costa Rica izay ahazoan'ny mpanjifa fidirana malalaka malalaka efitrano malalaka. Ny mpanjifa UNIGLOBE Travel manerantany dia afaka mamandrika ny fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny UNIGLOBE eo an-toerana ihany koa amin'ny vidiny mihena.
"Am-pireharehana lehibe no nanambaranay ny fiarahanay miaraka amin'ny BAC Credomatic VIP Lounge, izay efitrano fandraisam-bahiny lehibe indrindra sy faran'izay tsara eto amin'ny faritra," hoy i Juan Carlos Gamboa, tompon'ny UNIGLOBE Premium Travel. “Ity toerana premium ity dia manome ny mpanjifanay fidirana amin'ny fitsaharana sy fialan-tsasatra ary serivisy ao amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina be olona indrindra any Amerika Afovoany.”
Ny BAC Credomatic VIP Lounge dia eo akaikin'ny vavahady 17 ao amin'ilay faritra nohavaozina ao amin'ny SJO ary mpikambana ao amin'ny Pass laharam-pahamehana - fandaharana maha mpikambana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe tsy miankina sy lehibe indrindra. Ireo mpitsangatsangana mamandrika sidina orinasa na fialantsasatra amin'ny alàlan'ny biraon'ny Travel UNIGLOBE manerantany dia afaka mahazo fihenam-bidy 15% amin'ny maha-mpikambana Priority Pass isan-taona.
Miasa manerantany hanompo ny mpanjifa eo an-toerana manerana ny firenena 60 mahery, Fitsangatsanganana UNIGLOBE manararaotra ny haitao ankehitriny sy ny vidin'ny mpivarotra tiany kokoa mba hitsitsiana fotoana sy vola ho an'ny mpanjifa amin'ny drafitra fitsangatsanganana sy fialan-tsasatra. Hatramin'ny 1981, ny mpivarotra orinasa sy fialam-boly dia niankina tamin'ny marika UNIGLOBE mba hanome valiny sy traikefa izay mihoatra ny andrasana. Uniglobe Travel International Limited fiaraha-miasa dia manana foibe any Vancouver, Canada.
Fihaonambe fikarohana momba ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany any India Iraisam-pirenena
Nosy Avaratra Seychelles hanatevin-daharana ny marika fanangonana lafo vidy an'ny orinasa vahiny mandray vahiny